XULO NOOCYADA CAANKA AH IYO NOOCYADA MAGNOLIA EE BEERTAADA OO LEH SHARAXAAD IYO SAWIR - BEERTA
Genus Magnolia (laga bilaabo Laatiin Magnolia) - cirigii ugu da'da ahaa ee dhirta ubaxyada. Waxay ka tirsan tahay dad badan (in ka badan 120 nooc) qoyska Magnolia, kuwaas oo qaar ka mid ah ay yihiin kuwa udul suga, koraya gobollada leh jawi kulul.
Ma taqaanaa? Noocan caynkan ah waxaa u sabab ah Charles Plumier, oo u magacaabay sharaf ka mid ah xeeldheeraha Faransiiska Pierre Magnol.
Magnolia waxaa laga helaa duurjoogta, noocyo kaladuwan waxay ku koraan kaymaha leh cimilada kulul iyo cimilada. Waxaa laga heli karaa bangiyada Himilada Himilada, Japan, Malaysia, iyo sidoo kale gobolada koonfur bari ee Maraykanka ee Brazil. Nasiib darro, waqtigan xaadirka ah in ka badan 40 nooc ayaa qarka u saaran.
Noocyo kala duwan ee magnolias eegto gebi ahaanba kala duwan, laakiin dhammaantood waxay u adeegaan sida quruxda weyn ee beertaada. Ka fikir noocyada ugu caansan iyo nooca Magnolia, si aad u go'aansato nooca nooca ugu wanaagsan ee beertaada.
Magnolia ayaa tilmaamay (qajaar)
Waddanka: Waqooyiga Ameerika. Dabeecadda, waxay ku koreysaa buurta buuraha, iyadoo qayb ka ah kaymaha adkaa, iyo sidoo kale qulqulka iyo xeebaha wabiga ee wabiyada buuraha. Waa geed qallafsan. Taajirta ciriiriga ah ee ciriiriga ah ayaa ku wareegsan da'da. Waxay kor ugu kacdaa ilaa 30 m. Caleemaha waa qaabka loo yaqaan oval or eliptical. Ubaxa - foomka bluebells, koraan ilaa 8 cm dhexroor, huruud ah-cagaar leh ubaxyada nawaaxiga. Wuxuu bilaabay inuu Bloom ka dib caleemaha Bloom, ubax ma lahayn urta. Waxay u koraan si dhakhso ah, adkaysi u dhaxan. Miraha waa casaan-casaan.
Waddanka: Peninsula Korean, Shiinaha, Japan. Magnoolojiga Siebold waa geed dheer, mararka qaarkood sharaxaadu waxay sheegaysaa in uu yahay geed yar oo qallafsan (illaa 10 m). Caleemuhu waxay leeyihiin qaab muuqaal ah. Ubaxa Bloom Juun isla markiiba ka dib caleemaha. Koob-qaabeeya, cad, oo leh caraf udgoon leh. Ubaxyada ayaa si khaas ah loogu habeeyey qulqulo dhuuban oo khafiif ah oo leh cirbad. Noocadan Magnolia waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu adkeysta qabowga.
Waa muhiim! Dhirta qaangaarka ah waxay u dulqaadan karaan dhirta hoos udhaca illaa 36 ° C iyada oo aan wax dhaawac ah.
Waddanka: Japan, Korea. A geed gaaban oo yar ama geed weyn. Dhalinyarada, waxay leedahay qaab shinni ah, oo leh da'da, laamaha ugu weynaa waxay noqdaan kuwo ballaaran, iyo taajajinta wareegsan. Magnolia Kobus wuxuu u koraa dhererka 10 mitir, wuxuu noqon karaa 4 ilaa 8 m ballaaran, Leaves waxay leedahay foomka cidhib-tirka ah waxaana loo qaabeynayaa si kale. Waxuu si aad u badan u barbar dhigaa bartamihii Abriil ilaa toddobaadkii koowaad ee bisha Maajo. Miraha waa sanduuqyo qaabab casri ah oo guduudan. Daweeyaa noocyada barafowga u adkaysta, laakiin si xun u beddelaya dhaxan dambe.
Waddanka: helitaanka noocyo kala duwan. Magnolia Lebner oo laga helayo Magnolia xiddiga iyo Magnolia Kobus. Waxay leedahay qaab daaqsi ah oo dhererkiisu yahay 4-6 mitir ama geed leh dherer ilaa 8 mitir. Taajirka noocyada kala duwan ayaa ku faafaya, iyo sidoo kale noocyada ay ka heshay. Caleemaha waxay leeyihiin qaab muuqaal ah ama qoton-oval ah. Ubaxa bilawga ah ee gobollada ubax-qaabeeya, iyo ka dib si buuxda u furan waxaa loo qaabeeyey si radially. Dhexdhexaadiyaha ubaxu wuxuu gaaraa 10-12 cm, wuxuu leeyahay ur wanaagsan, iyo midabka, sida noocyada waalidka, waa cadaan.
Qaybaha ubaxa ah ee ubaxa waxaa loo sameeyay ilaa 12 gogo ', waxay haystaan ​​qaab yar (qaab yar), halka ay ku sii socdaan saldhiga. Ubax wuxuu bilaabmaa xitaa kahor caleemo - dhammaadka Abriil - bilowga Maajo. Miraha waxay u muuqdaan qaybta labaad ee Sebtember. Waxay u diirisaa si fiican u dhaxan.
Waddanka: Japan Magnolia-muuqaalkeedu waa mid cufan oo ballaaran oo faafaya. Waxay leedahay qaab isku dhafan, wuxuu koraa ilaa saddex mitir oo dherer iyo ballac. Si tartiib ah ayuu u koraa. Caleemaha waxay leeyihiin qaab muuqaal ah ama qaab elektaroonik ah, oo si haboon loo habeeyey. Bilaabaan in la barbardhigo ka hor inta aan caleen, bisha Maarso-Abriil. Tufaaxu waxay u muuqdaan kuwo qeylood ah, tiradoodana hal ubax ayaa gaari kara 40, oo ka baxsan xiddigta. Ubax waa caddaan, oo leh caraf udgoon. Xayawaankani sidoo kale waxay khuseeyaan dhaxan.
Magnolia Caleen weyn
Waddanka: Waqooyiga Ameerika. Geed khafiif ah oo cabbir dhexdhexaad ah. Inta lagu jiro 15 ilaa 20 sano ee ugu horeysa, taajku wuxuu leeyahay qaab isku dhafan, laakiin da'da waxay noqotaa mid aan caadi ahayn. Jirka waa marwalba si toos ah, mararka qaarkood dallacaadda saldhigga. Caleemaha waxay leeyihiin qaab adag waxayna leeyihiin qiyaaso cajiib ah - illaa 1 m dherer. Waxay aad u culus yihiin, laakiin isla mar ahaanteed, khafiif ah, oo leh geeso jilicsan, oo ku xayiran dhamaadka. Saldhigoodu waa qalbi-qaabeeya, on top of midab madow oo cagaaran, siman. Midabka ugu hooseeya waa mid buluug ah wuxuuna leeyahay lakab khafiif ah "hub". Muuqaalka muuqaalka ah ee ubaxyada waa saddex dhibco guduud ah oo ku yaalla dabaqyada gudaha. Ubaxku wuxuu leeyahay qiyaas aad u karsan oo weyn. Midabkooda bilowga ah ee ubaxku waa creamy-white, iyo wakhti ka dib waxay helayaan hadh ah fool maroodi. Xilliga ubaxu: dhammaadka Abriil - Maajo.
Waddanka: Southeast USA. Wakiil ka mid ah noocyada Magnolia magnolia. Dhererka wuxuu gaari karaa 30 mitir. Ka baxaa ovate, ballaaran. Midhaha xayawaankani waa polyleaf faleebo ah, kuwaas oo ah miraha gaduudan.
Seeds of noocyada this ma si dhakhso ah u dhacaan miro jabsan: waxay ku dhegsan yihiin pedicels, muuqaalka u eg qurxinta Christmas. Ubaxyada noocan ah ee Magnolia waa caddaan ama midabkeedu midabkiisu yahay, mid aad u ballaaran. Hayso ur wanaagsan oo udgoon, iyo ubaxu wuxuu dhamaanayaa xagaaga.
Waddanka: Shiinaha Magnolia officinalis sidoo kale waxay tilmaamaysaa Magnolia magnolia. Caleemaha Leather waxay leeyihiin qaab muuqaal ah. Dhir ahaan, dhirtu waxay gaadho 20 mitir. Sababtoo ah pubescence cufan ee caleemaha yihiin casaan-brown. Waxaa loo qaabeeyey si siman, dhererkoodu wuxuu gaaraa 25 cm Muddada ubaxyada: May-Juun. Ubaxyada midabka, qaabka iyo urta waxay aad ugu eg yihiin magnolia-weyn oo ubax leh.
Ma taqaanaa? Magaalooyinka loo yaqaan 'Medicinal Magnolia' ayaa loo isticmaalay dawooyinka dabiiciga ah ee Shiinaha muddo ka badan 2000 sano.
Waddanka: Shiinaha A geedkii geedkii, mararka qaarkood geed. Wuxuu koraa dhererka 8-10 mitir. Caleemaha waxay leeyihiin qaab muuqaal ah, dhererkoodu wuxuu gaaraa 15 cm. Ubaxku waa mid aan caadi ahayn oo midab-cad oo cad oo aan caadi ahayn, oo aad u kariye. Qaabka u ekaa ubaxa.
Muddada ubaxu waa 10-12 maalmood oo keliya, wuxuu bilaabmaa Abriil ama horraanta May. Bishii Oktoobar, Magnolia naasku wuxuu bilaabmaa inuu midho dhalo, midhaheedu waa 5-7 cm dheer, midab casaan ah, dhinaca iftiinka leh waxaa lagu daboolay dhibicyo caddaan ah.
Waddanka: Waqooyiga Ameerika. Mucjiso Tani waxay leedahay magac kale - saddex jeer. Dhir ilaa 5-6 mitir. Noocaan ayaa helay magacyo u gaar ah caleemaha, kuwaas oo lagu soo ururiyey saddex at darafka caleemaha, sidaas abuuraya nooc dallad ah. Leaves waa mid la mid ah ama midba midba qaab ahaan. Ubaxyada waa mid cadaan ah, ballaaran, ilaa 25 cm dhexroor. Si ka duwan noocyo kale, dhirta magnolia ubaxa waxay leeyihiin ur xun. Xilliga ubaxu: dhammaadka May - bilowga Juun. Muddada - illaa 20 maalmood. Miraha waxay ku jiraan qaabab casri ah, oo bilaabaya inay midho dhasho dhamaadka Sebtembar.
Waddanka: Koonfurta iyo Waqooyiga Ameerika. Geed khafiif ah oo leh dhar gaaban ama geed weyn. Gabdhaha taajka ah ee dhalinyarada, da'da ayaa noqda mid aad u badan. Laamuhu waa furfuran yihiin iyo shirokoraskidistye, dhulka hoostiisa hoos u dhig oo u ekaado asalka dhabta ah. Waxay ku koraan isku mid ah width iyo height - ilaa 4-8 mitir. Wuxuu ka tagaa si ballaadhan ama jajab ah. Ubax bilaabmaa ka hor caleemaha Bloom. Ubaxyada waxaa loo qaabeeyey sida luloota cad oo leh dhibco-casaan. Waqtiga ubaxa: Abriil - Maajo. Miraha waa cylindrical in casaan. Magnolia Sulanzha qabow u adkaysta, laakiin ubaxyada ayaa laga yaabaa inay ku dhacdo dhaxan dambe, laakiin sharaxaadda ayaa laga yaabaa inay isbedesho iyada oo ku xiran kala duwanaanta.
Sida aad u arki karto, noocyada kala duwan ee Magnolia waxay isku mid yihiin midba midka kale, qaarna waxay leeyihiin kala duwanaan kala duwan. Magnolia kasta ayaa leh noocyo badan, oo loogu talagalay beerista xaalado kala duwan, sidaas darteed nooca noocyada ayaa kori doona beertaada, waxay kuxirantahay adiga.